Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Gmail | Androidsis
Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Gmail
Miverina miaraka amin'ny fampianarana Android fototra izay tsy inona akory fa ireo fampianarana an-dahatsary mikendry ireo mpampiasa Android vaovao, na dia toa mino aza izahay fa tsotra be ny raharaha ny fomba fananganana kaonty Gmail Zavatra tsotra dia kely izany tokony ho fantatry ny rehetra sy ho fantany, ny tena marina dia isan'andro aho dia mahazo mailaka fakan-kevitra amin'ireo mpampiasa vaovao izay tsy mahatakatra na tsy mahalala izay dingana tokony harahina mamorona kaonty Gmail vaovao Tena ilaina mba hankafizana ny serivisy omen'ny terminal Android.
Ohatra, ny Ny fananana kaonty Gmail no takiana ilaina sy ilaina hamela antsika hiditra amin'ny Play Store na Google Play, izay tsy inona fa ny fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android izay ahafahantsika misintona ny rindranasa sy ny lalao amin'ny katalaoginy midadasika izay efa mihoatra ny iray tapitrisa fisoratana anarana sy lalao voasoratra. Fantatrao izao, raha manana olana amin'ny fahafantarana ny fomba hamoronana kaonty Gmail vaovao ianao dia manoro hevitra anao aho mba tsindrio «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» satria manazava ny dingana tsotra hanarahana ny terminal Android-ko sy ny solosainay manokana izahay.
1 Ahoana ny fomba fananganana kaonty Gmail avy amin'ny solo-sainao manokana
2 Ahoana ny fomba fananganana kaonty Gmail avy amin'ny findainao
3 Sintomy maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ny Gmail
Ahoana ny fomba fananganana kaonty Gmail avy amin'ny solo-sainao manokana
Para mamorona kaonty Gmail anay, Fepetra tena ilaina mba hankafizantsika tanteraka ireo terminal Android, azonay atao ny manao izany avy amin'ny solo-sainay manokana amin'ny alàlan'ny tranonkala rehetra. Amin'ny alàlan'ny default amin'ny tutorial video nakambana dia vitako izany avy amin'ny tranokala Google izay tsy iza fa Chrome na Google Chrome, na dia tsy miraika aza izany ary araka ny nolazaiko fa afaka manao izany amin'ny tranonkala rehetra tadiavinao ianao.
Ny dingana tokony harahina dia tsotra toy ny tsindrio ity rohy ity raha hiditra amin'ny Gmail ianao ary fenoy ireo saha ilaina rehefa manazava amin'ilay horonantsary mifatotra izay avelako eo ambonin'ireo andalana ireo fotsiny.
Rehefa tsindrio ilay rohy voalaza etsy ambony dia tokony hiseho ny pejy toa an'io, izay tsy maintsy tsindrio izay voalaza ao "Mamorona kaonty vaovao":
Rehefa tsindrio ny Mamorona kaonty vaovao dia hiseho ny efijery iray izay tsy maintsy hamenoanao ny saha rehetra fotsiny ary asehoko anao amin'ny horonan-tsary. Sahan-tsasa vitsivitsy izay voafetra amin'ny:
Ny anarantsika feno. Anarana sy anarana.
Safidio ny solonanarana. Ity no adiresy mailaka antsika manokana izay mety hanana extension extension .gmail.com.
Hamafiso ny tenimiafina.
Laharana finday. Tsy voatery izany.
Hamarino ny kaody captcha.
Ny saha izay matetika manome ny olona olana indrindra dia ny saha ny fanamafisana captcha hanamafisan'i Google fa tena mpampiasa izahay ary tsy milina. Raha manana olana amin'ity sehatra ity ianao dia mamporisika anao aho hijery ilay lesona an-tsary niraikitra napetrako etsy ambony izay asehoko anao ny fomba samihafa hahafantarana ilay kaody captcha voalaza etsy ambony tsy misy olana.
Ahoana ny fomba fananganana kaonty Gmail avy amin'ny findainao
Raha izay no tianao mamorona ny kaonty Gmal anao amin'ny findainao AndroidAzontsika atao ihany koa ny manao an'io amin'ny alàlan'ny fanarahana fotsiny ireo torolalana izay tondroiko amin'ity lesona an-tsary mifatotra ity, horonantsary avelako eo ambonin'ireo andalana ireo ary noforoniko taloha kelin'izay.
Sintomy maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ny Gmail
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana kaonty Gmail
Hotmail.com dia hoy izy:
Misaotra betsaka, nanampy betsaka ahy ity fampianarana ity. Io no notadiaviko, na dia mety ho mora aza indraindray. Matetika sarotra ny mamorona kaonty gmail na hotmail. Miarahaba.
Valiny amin'ny Hotmail.com
Ny Huawei P9 dia hanana fiovana efatra
LG K8 dia ofisialy izao: efijery 5-inch ary Android 6.0 Marshmallow